Iningi lingibiza ngoDoug, namuhla bekungubaba | Martech Zone
NgoMsombuluko, Juni 18, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngokwethembeka konke, angizange ngihlele isikhathi salokhu okuthunyelwe. Kuyinto engaqondakali nokho ukuthi kufanele ngihlanganyele nani nonke.
Fred uthole isixuku sonke sabantu phezulu ku-tizzy muva nje lapho ebuza ngeminyaka nemiphumela yayo kuthalente lezamabhizinisi. Kufakwe emuva emuva kwakungu- UDave Winer, Scott Karp, Steven Hodson, kanye nenqwaba yabanye abathi Ubeke amazwana.
Bengingenakho okuningi engingakusho ngesihloko ngakho ngiphawule kancane. Ngiyayithokozela indawo yokusebenza ehlukahlukene lapho kukhona khona intsha kanye nesipiliyoni. Abantu abasha bavame ukungayinaki kangako imingcele ngakho-ke ukubukeka kwabo okusha nokuntuleka kokwesaba kuzinikeza ithuba lokuthatha izingozi nokuza nezisombululo ezinkulu. Okuxakayo ukuthi ngithanda ukucabanga ngami njenge-39 encane futhi ngivame ukukhuluma futhi ngifuna ezinye izindlela ezinhle kunokujwayelekile. Okuhlangenwe nakho, ngakolunye uhlangothi, kuvame ukulinganisela ubungozi nemiphumela - imvamisa kuphazamisa inhlekelele.
NjengeMenenja Yomkhiqizo, ubungozi engibulethayo abukho enkampanini yami kuphela. Ingozi engicabanga ukuthi idluliselwa kumakhasimende we-6,000 asebenzisa isoftware nangaphezulu ezinkampanini zabo. Leyo piano enhle esilenga ophahleni, ngakho-ke ngifuna ukuqinisekisa ukuthi izintambo zivikelekile futhi amafindo aboshiwe wonke ngaphambi kokuthi sinqume ukuwahambisa endaweni yawo.
Namuhla bekungafani. Ngenkathi ngibeka imingcele ethile namhlanje kuzinsizakusebenza nephrojekthi, ngangibhekene nomuntu othuka ngathi, “Kulungile, Baba!”. Yize kwakwenzelwe ukuhlambalaza, empeleni ngikuhlulile ngazola impela. Uma kukhona into eyodwa engiziqhenya ngayo empilweni yami, bekungubaba omkhulu.
Nginezingane ezimbili ezijabule, ungangeni enkingeni .. nge eyodwa yamukelwa ekolishi ngomfundaze futhi enye esanda kuwina i- “Ghandi Award” esikoleni sayo. Bobabili banethalente kwezomculo - omunye uyacula, uyaqamba, futhi uxuba umculo… omunye umlingisi omuhle nomculi.
Ngakho-ke, ozakwethu omncane emsebenzini bekufanele mhlawumbe aqhamuke nokuhlukile kunokuthi “Baba”. Ngiyalithanda igama elithi "Baba". Uma ngizwakala ngathi "Baba", mhlawumbe kungenxa yokuthi ngangisingatha isimo esasikhumbuza ukuthi kufanele ngikhuze ingane. Okuxakayo ukuthi, angivamile ukuba nalezi zimo nezingane zami.
Ingabe lokhu kuwushintsha umbono wami ngeminyaka, ibhizinisi, kanye nebhizinisi? Lutho neze. Ngisakholelwa ukuthi sidinga ukungahloniphi kwentsha ukucindezela imingcele yalokho esingakufinyelela. Mina do bakholelwa ukuthi ochwepheshe abaningi baba nokubekezelela okuncane ngeminyaka futhi bathambekele ogwini ngaphakathi kwemingcele ebekiwe. Ngiyakuthokozela ukuphikisana, yize ngikholwa ngenhlonipho, isibopho, nemingcele.
Izifundo engizifundisa izingane zami ukuthi ngake ngaba lapho bekhona ngaphambilini, ngenza amaphutha, futhi ngilangazelela ukudlulisa ubuhlakani engikufundile. Lokho akusho ukuthi kufanele balandele ezinyathelweni zami, noma kunjalo. Ngiyalithanda iqiniso lokuthi indodakazi yami isesteji lapho kungithathe iminyaka ukuthola ukuzethemba. Ngiyalithanda iqiniso lokuthi indodana yami ibhekisa amabombo eKolishi ngenkathi ngihamba ngingenhloso yokujoyina uMbutho Wezempi. Bangimangaza nsuku zonke! Ingxenye yalokho kungenxa yokuthi bayayibona imingcele, bayangihlonipha, futhi bayazi ukuthi banenkululeko yokwenza lokho abangakuthanda (inqobo nje uma kungabalimazi bona noma omunye umuntu).
Ngiyethemba ukuthi "ingane" yami emsebenzini ingafunda into efanayo! Angingabazi ukuthi uzokwazi ukumangaza inkampani futhi abe nomthelela omkhulu, kodwa izinto zokuqala kuqala… qaphela futhi uhloniphe ulwazi olukhona futhi uqonde imingcele. Ngemuva kokuthi ukwenzile lokho, mangaza wonke umuntu ngokushisa umzila omusha endaweni okungekho muntu owake wacabanga ngayo. Ngizokusiza ufike lapho! Kakade, yini “uBaba”?
PS: Ngonyaka ozayo, ngingathanda ikhadi loSuku Lobaba… mhlawumbe nothayi.
Ngisengabhalisela iPhephandaba uma…
UJun 30, 2007 ngo-8: 18 AM
Uzwakala ungumfana okwaziyo ukugingqa ngezibhakela. Njengenhloko yomnyango, ngithola ukuthi abantu abasebenza ngaphansi kwami ​​bayazazisa izimfanelo zakho. Ngale ndlela, siyakuhalalisela ngokufeziwe kwezingane zakho.